१६ दिने अभियान चलीरहेको बेला छाउगोठमा महिलाको मृत्यु | Sudurpaschim Online
अछाम, समाज, सुदूरपश्चिमप्रदेश
लैङ्गिक हिन्सा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलीरहेको बेला अछामको साँफेवगर नगरपालिका वडा नम्वर ३ सिद्धेश्वरको डिक्रेनिमा सोमवार एक जनाको छाउपडि गोठमा मृत्यु भएको छ । ज्यान जानेमा साँफेबगर नगरपालिका वडा नं ३ सिदेश्वरका २१ वर्षया पार्भती बुढा रावत रहेका छन् ।
मेल्लेख गाउँपालिका वडा नम्वर ७ नन्देगडा माईति घर भएकि पार्वती १८ महिना पहिले विहे गरेर सिद्धेश्वर आएकि थिईन् । उनी आईतवार साँझ खाना खाएर सुतेकि थिईन । विहान साढे सात वजे सम्म नउठे पछि छाउगोठको ढोका फोरेर हेर्दा मृत भेटिएको उनका जेठाजु छत्र रावतले जानकारी दिनु भयो ।
छाउगोठ घर भन्दा १०० मिटर टाढा रहेको छ । उनको निशासीएर मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय साँफेबगरका प्रमुख प्रहरी निरिक्षक नरपती भट्टले बताउनु भयो । उनी महिनावारि भएको ४ दिन भएको जनाइएको छ ।
मृतकका श्रीमान करन रावत बिगत ६ महिना देखि रोजगारिको सिलसिलामा भारतमा रहेको साफेबगर नगरपालिका ३ का वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बुढाले बताउनु भयो ।
अछामको छाउपडी कुप्रथा न्युनिकरण गर्न महिनावारी भएको बेला महिलालाई छाउपडी गोठमा राख्ने परिवारलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्नुका साथै गाविसबाट प्रदान गरिने सबै सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिने निर्णय गर्दा समेत गोठमा बस्नेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन ।
सुदुरपश्चिम सरकारले छाउपडी कुप्रथा धेरै मानिने अछाम जिल्लामा छाउपडी कुप्रथालाई‘ फौजदारी अपराध’को रुपमा संसदमा विद्येयक पास भएको छ । तर समस्या भने जहाँको तेहि रहेको छ ।
पहिलो पटक अछामको रिडिकोट की १५ वर्षीय शर्मिला भुलको छाउपडी गोठमै भएका बेला मृत्यु भएको थियो । पहिलो पटक शर्मिला भुलको ज्यान गएपछि अछाममा छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको हो । उक्त अभियान अन्तर्गत हालसम्म साविकका ३१ गाविस छाउपडी गोठ मुक्त घोषणा भइसकेका छन् । जिल्लामा गोठमुक्त अभियान चलिरहे पनि महिलाले गोठमा ज्यान गुमाउने क्रम रोएिको छैन ।
अरू तीर्थ पटक–पटक, परशुरामधाम पुगौँ एकपटक
छाउपडी कुप्रथालाई न्युनिकरण गर्न अछाममा बिभिन्न अभ्यास चलिरहेका छन । तर, जे जति लगानि गरियो त्यस अनुसारको प्रतिफल भने पाइइएको छैन । यो कुप्रथालाई न्यूनिकरण गर्नको लागि भनेर जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । तर एक वर्ष भरी छाउपडी कुप्रथा न्यूनिकरण गर्नको लागि कति बजेट खर्च भयो ? कुन कुन ठाउँमा खर्च भयो ? कत्तिको प्रभावकारी भयो ? यसको लेखाजोखा न सरकारी कार्यालयहरुले राखेका छन् न त गैर सरकारी कार्यालयहरुले राखेका छैन । अछाममा अहिलेसम्म छाउगोठमै १५ जना महिलाको ज्यान गइसकेको छ ।
डडेल्धुराको पुइलेकमा विमानस्थलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन